Bankinter wuxuu helay faa'iido rikoor ah | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Bankinter wuxuu helaa faa'iido rikoor ah
Jose recio | | Banca, Dhaqaalaha guud
Bankinter waa mid ka mid ah wakiilada bangiga dhexe taasi waxay leedahay talo bixin kafiican falanqeeyayaasha maaliyadeed ee kaladuwan. Ilaa heer ay macquul tahay inay dib u qiimeyn ku sameyso xitaa ka sarreysa tan ay soo saareen bangiyada waaweyn ee Isbaanishka. Iyada oo ah mid ka mid ah xulashooyinka lagu biiri karo faylalka tacliimeed ee maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe wixii hadda ka dambeeya. Marka laga soo tago tixgelinta kale ee farsamada iyo sidoo kale sidoo kale aragtida aasaasiga ah.
Waqtigan xaadirka ah saamiyada kooxdan maaliyadeed waxay ku jiraan heerar ka kooban inta udhaxeysa 7 iyo 8 euro. Haddii iska caabbintaan ugu dambeysa ay dhaaftay, lama diidi karo inay xitaa kor u kici karto 10 Yuuroo, in kasta oo xaaladdan loogu talagalay dhexdhexaadka iyo muddada fog Sababtoo ah dabcan lama iloobi karo inay ku dhex milmayso xilligan xun ee bangiyada ay marayaan suuqyada sinnaanta. Dareenkan, Bankinter dhab ahaantii ma noqon karo mid ka reeban. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la rajeeyo in aakhirka qaybtani ay leedahay waxqabad ka wanaagsan sidii loo furi lahaa jagooyinka qiimaha this ee tusmada xulashada suuqa saamiyada Isbaanishka, Ibex 35.
In kasta oo liddi ku ah, sidoo kale waa lagama maarmaan in la falanqeeyo in qiimaha saamiyadiisu ay ka yimaadeen heerar aad uga hooseeya qiimaynta ay xilligan haysato. Sidaa darteed, waa inaad si taxaddar yar u jirtaa ka hor intaadan gelin boosaska ay ka soo jeedaan maxaa yeelay khataraha howlaha had iyo jeer way joogaan oo xitaa ka sii badan yihiin bilahaan adag ee suuqa saamiyada Isbaanishka iyo gaar ahaan waaxda bangiyada. Mid ka mid ah dabeecadaha ugu xun ayaa soo ifbaxayay ilaa 2017. Kuwani waa doorsoomayaal ay tahay in la tixgeliyo ka hor inta aan go'aan la gaarin, hal dhinac ama mid kale. Waa sababta sababta ka sareysa tixgelinta kale.
1 Natiijooyinka Bankinter
2 Khadadka ganacsiga oo dheellitiran
3 Xuduudaheena dhaafsiisan
4 Qaybaha ku jira astaanta bangiga
5 Shirkad caymis oo isku xidhan
6 Bankinter faylalka faylalka
Faa'iidada saafiga ah ee Bankinter ayaa gaadhay 526,4 million euro 2018, 6,3% ayaa ka badan isla muddadii sanadkii hore. Hay'addu waxay heshay lambarradan diiwaangelinta iyada oo ay ugu wacan tahay ganacsigeedii soo noqnoqday iyo "iyada oo ay la socoto xooggeeda ugu weyn: faa'iidada, xallinta iyo tayada hantida, jagooyinka hoggaanka waaxda" Tani waa xaqiiqo ku habboon oo loo gudbiyay Guddiga Suuqa Qaranka ee Amniga ( CNMV).
Taas oo uu Bankinter ku soo warramay in faa'iidada saafiga ah ee hay'adda dhammaadkii sanadkii hore ay gaadhay 526,4 milyan oo euro, iyo Canshuur ka hor canshuurta 721,1 milyan, taas oo ka dhigan kor u kac marka loo eego sanadkii hore ee 6,3% iyo 6,5%, siday u kala horreeyaan. Dareenkan, kooxdan maaliyadeed waxay ku xireen 2018 kobaca dhinacyada oo dhan. Dakhliga dulsaarka saafiga ah wuxuu ku egyahay sanadka 2018 1.094,3 million euros, taasoo 5,8% ka badan xog isku mid ah sanad ka hor.
Khadadka ganacsiga oo dheellitiran
Natiijooyinka Kooxda Bankinter waxay ku saleysan yihiin ficil ahaan gebi ahaanba ganacsiga macaamiisha, taas oo ka dhigaysa iyaga inay sii jiri karaan mustaqbalka. Bankinter wuxuu xoojiyay dhowrkii sano ee la soo dhaafay istiraatiijiyad kala duwanaansho dakhli taas oo ganacsiyada qaangaarka ah iyo been abuur ah oo leh ganacsiyo cusub oo lagu soo daray oo leh koritaan sareeya, taas oo u saamaxday horumar isku dheelitiran guud ahaan.
Ku darsiga marka loo eego dhammaan khadadkan bangiga wadarta guud ayaa sannadihii la soo dhaafay ku kala duwanaa iyada oo loo adeegsanayo kor u qaadidda sumcadda ganacsiyadaan cusub, sida Bankinter Portugal ama ganacsiga macaamiisha. Khadadka sameeya waxtarka ugu sarreeya ee wadarta guud wuxuu sii wadaa Bangiga Ganacsiga, oo leh 30%.
Dhanka kale, deynta faylalka Ganacsigani wuxuu la kulmay isbeddel koror muddo sanado ah taas oo horseeday in sanadka uu xirmo 24.000 milyan oo yuuro, taas oo 22.600 milyan ay u dhigantaa deynta faylalka ee shirkadaha Isbaanishka, taas oo u dhiganta 3,2% in ka badan sanadkii kore, markii waaxda gebi ahaanba hoos ayuu u dhacay 5,1%, sida ku cad xogta laga soo bilaabo Bisha Nofeembar Bangiga Spain.
Waxqabadka iyo xiriirka xiriirku wuxuu ku sii kordhayay culeyska ganacsiga Shirkadaha, iyadoo macaamiisha ay ku aaminaan bangiga qeyb caalami ah oo baahidooda dhaqaale ka mid ah. Tan waxaa lagu muujiyey, tusaale ahaan kororka dakhliga khidmadda, taas oo ka dhigan 18% in ka badan sanadka. Si la mid ah, isku xirnaanshaha weyn ee shirkadaha bangiga wuxuu keenay natiijooyin wanaagsan oo ay heleen howlo gaar ah sida Maalgashiga Bangiyada ama Ganacsiga Caalamiga ah, oo durba soo saarta 27% guud ahaan guud ahaan ganacsiga Shirkadda iyo meesha uu Bankinter yahay maanta waa summad astaan ​​u ah suuqa.
Qaybaha ku jira astaanta bangiga
Bangiyada Ganacsiga, ama shakhsiyaadka, ayaa ah khadka labaad ee ganacsiga bangiga iyadoo lagu saleynayo tabarucaada guud ee guud, iyadoo wadarta 28%. Qeybtan ganacsiga dhexdeeda, qeybta Bangiyada Gaarka loo leeyahay, oo si wada jir ah u uruurisa macaamiisha leh hantida ugu weyn, waxay ku adkeysatay jawi adag gaar ahaan. Dhamaadka sanadka, hantida la maareeyay ee macaamiishani waxay gaarayeen 35.600 milyan oo yuuro, taas oo 2% ka badan sanad ka hor, in kasta oo la yareeyay 2.500 milyan oo yuuro oo laga soo saaray sanduuqyada saamaynta suuqa awgeed. Intaa waxaa dheer, bangigu wuxuu macaamiishaas ka qabsaday 3.100 milyan oo yuuro oo cusub, marka la barbar dhigo 2.800 sanadkii 2017.
Qaybta aasaasiga ah ee xariiqan ganacsi waa qaybta Bangiyada Shakhsiyeed, oo ku dhammaatay sanadka sinnaan dhan 21.600 milyan oo yuuro, 2% in ka badan inkasta oo saamayn suuq ay hoos u dhigtay qiimaha faylalka tacliimeed ee 1.000 milyan oo yuuro. Sicirka cusub ee macaamiishaas laga qabtay 2018 wuxuu ahaa 1.400 milyan. Mar labaad, waxqabadka wanaagsan ee alaabtu waxay si cad u soo jiidanaysaa macaamiil cusub, sida koontada mushahar bixinta iyo amaahda guryaha qaababkeeda kala duwan.
Sidaa darteed, faylalka xisaabaadka mushahar bixinta ee dhammaadka sanadka wuxuu taagnaa 8.317 milyan oo yuuro, taas oo 22% ka badan tii sanadkii 2017. Marka laga hadlayo deynta guryaha, mugga wax soo saarka cusub ee sanadka wuxuu ahaa 2.532 milyan oo euro. Euro, 11% in ka badan tii 2017, ahaanshaha 30% ee moorgeejyadaas oo ah heer go'an.
Shirkad caymis oo isku xidhan
Khadka Tooska ah waa sadarka saddexaad ee ganacsiga marka la eego tabarucaadka guud ee bangiga, oo leh 22%. Tirada siyaasadaha ama khataraha ay ceymisey shirkaddani waxay gaartey 3,01 milyan dhammaadka sanadka, taas oo 7,9% ka badan tii sanadkii 2017. Lacagta caymiska ee la qoro ee 2018 waxay gaareysaa 853,1 milyan oo yuuro, oo ah 7% in ka badan sanad ka hor, iyadoo kororka khidmadaha gawaarida ee 5,3% marka loo eego celceliska 2,4% ee waaxda; iyo 12,4% in ka badan oo ah khidmadaha Guryaha, marka la barbardhigo celceliska kobaca qaybta ee qaabkan oo ah 3,2%, iyadoo xogta la hayo illaa Nofeembar. Qiyaasta isku dhafan ee ganacsigan waxay mareysaa 87,3% dhamaadka sanadka, iyo ROE oo ah 38%.
Ku saabsan Ganacsiga macaamiisha, Waxaa lagu shaqeeyaa Bangiga Macaamiilka ee Macaamiilka, faylalka macaamiisha ayaa hadda ka badan 1,3 milyan, 18% ka badan kuwii jiray sanad ka hor. Dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee macaamiisha ayaa ku sii socday xawaare wanaagsan sanadka oo dhan, iyadoo dheelitirkiisu yahay 632 milyan oo yuro deyn cusub oo mataleysa 46% isla tiradaas tan iyo bishii Diseembar 2017.
Bankinter faylalka faylalka
Marka laga hadlayo faylalka maalgashiga, waxay ku xirtay sanadkii 2.000 milyan oo yuuro, iyadoo koror dhan 34% marka loo barbar dhigo isla tiradaas sanad ka hor. Sida Bankinter Portugal, oo ah khadka ganacsi ee ugu dambeeyay ee lagu daray waxqabadka bangiga, wuxuu xiray 2018 guuleysatey dhammaan cinwaanadeeda, leh kobcin laba lambar labadaba kheyraadka, 17% in kabadan tii 2017, iyo maalgashiyada amaahda, oo gaaraya mug gaarayo 5.400 million euros, 12% in kabadan sanad kahor, iyadoo koboca amaahda ganacsiga ay si gaar ah muhiim u tahay: a 42% more.
Sidoo kale, dhammaan xadadka xisaabta Bankinter Portugal waxay muujinayaan kobaca mid baaxad weyn: 13% in kabadan oo dulsaarka saafiga ah, 14% ayaa kayar guud ahaan guud ahaan, iyo 73% oo ka sareeya 2017 dhanka faqriga. Iyada oo intaas oo dhan, macaashka ka hor canshuurta waxqabadkani uu bilaabmayo illaa 60 milyan oo euro, 92% ka badan tan la helay 2017. Xog ahaan si looga fikiro bal in bangigan Isbaanishka ah uu noqon karo mowduuca howlaheenna suuqa saamiyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Bankinter wuxuu helaa faa'iido rikoor ah
Iberdrola miyuu ka sarreyn karaa suuqa saamiyada?
Donald Trump ma xiiseynayo dhicitaanka suuqyada saamiyada